Nylon Carpet Tile Fekitori - China Nylon Carpet Tile Vagadziri, Vatengesi
Isiri-Stock Yakabatwa Rug
Huru bhizinesi chiyero chinofukidza kapeti, pasi uye zvimwe zvigadzirwa zvemukati, kushandira nyeredzi mahotera, giredhi A zvivakwa zvehofisi, dzimba dzekupedzisira-pekugara nekugara.Iyo inouya neakagadzirwa nemaoko-akaputirwa makapeti, maketi akarukwa eAxminster, makapeti eWilton, makapeti akadhindwa, zvakare sehuwandu hwakawanda hwemasheya ematepeti mataipi, SPC vinyl tinya plank ine yakapfava inotsigirwa, kapeti accessories.
Nylon graphic ine PVC kumashure-M & M
Iko kuunganidzwa kweM & M yakagadzirirwa vagadziri vefashoni-vanoziva uye vatengi. MM301A, MM301B, MM301C uye MM301D ari 1-4 gradient kubva ku grey kusvika kune yakajeka ruvara. MM302-MM310 mavara akasimba kuti ashandiswe sechiedza chekamuri rese dhizaini. Iko kusununguka kwemahara kwavo kuchaita kuti yako imba ive isinga peri mune akasiyana uye asina kujairika.
Iyo Park Avenue muunganidzwa wakasanganiswa dhizaini ye1-4 gradient paruvara, izvo zvinowana mufashoni uye zvisina kujairika mhedzisiro kunyangwe pasina rubatsiro rwehunyanzvi dhizaini. Kuisirwa kwemahara kunogona kuumba isina kujairika maitiro uye mafashoni kutaridzika